Nepal Auto | अटो शो विगतदेखि बर्तमानसम्म
अटो शो विगतदेखि बर्तमानसम्म 31 Bhadra, 2075
यस पटक नाडा अटो शोको १३औं संस्करण चलिरहेको छ र आज समापन हुँदैछ । यसै सन्दर्भमा यो भन्दा पहिलेको अटो शो र यसको सामान्य जानकारी प्रस्तुत गरिएको छ ।
पहिलो अटो शो–१९९८
सन् १९९८ बाट नेपालमा अटो शो शुरु भएको हो । ग्लोवल एग्जिविसन एण्ड म्यानेजमेन्ट सर्भिसेज (जेम्स) को आयोजनामा नोभेम्वर ५ देखि ८ सम्म पहिलो अटो शो भएको थियो । त्यतिबेला नाडाले आयोजक नभई सहयोगीको भूमिका मात्र निर्वाह गरेको थियो । उक्त अटो शो भृकुटी मण्डपमा आयोजन भएको थियो । जतिवेला नेपालका अटोसम्बन्धी विभिन्न २६ कम्पनीले सहभागिता जनाएका थिए । पहिलो अटो शो भएका कारण अवलोकनकर्ताको संख्या न्यून थियो ।
दोस्रो अटो शो –२०००
दुई वर्ष पछि २००० को नोभेम्वर २२ देखि २६ सम्म दोस्रो अटो शो आयोजना भयो । जसमा ३१ कम्पनीले सहभागिता जनाएका थिए । त्यतिवेला पनि ग्लोवल एग्जिविसनले नै शो को आयोजना गरेको थियो र नाडा सहयोगी भूमिकामा थियो । भृकुटिमण्डपमा आयोजना भएको उक्त शो राजपरिषद् स्थायी समितिका अध्यक्ष डा. केशरजंग रायमाझीले उद्घाटन गरेका थिए ।
तेस्रो नाडा अटो शो–२००४
तेस्रो संस्करणसम्म आउँदा अटो शोको अगाडि नाडा थपिएर ‘नाडा अटो शो’ बन्यो । नाडा र जेम्सको संयुक्त आयोजनामा अटो शो सम्पन्न भएको थियो । उक्त अटो शो भृकुटीमण्डपबाट सरेर नयाँ बानेश्वरस्थित वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा आयोजना भएको थियो । जुन अटो शोमा सहभागिताहरुको संख्या विगतका तुलनामा दोब्बर थियो । मन्त्री हरिबहादुर बस्नेतले उद्घाटन गरेको अटो शोमा ६२ कम्पनीले सहभागिता जनाएका थिए ।
चौथो नाडा अटो शो–२००७
यो अटो शो पनि वीरन्ेद्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा भएको थियो । २७ सेप्टेम्वरदेखी १ अक्टोबरसम्म भएको शोको उद्घाटन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले गरेका थिए । अघिल्ले अटो शोमा भन्दा यसमा सहभागी कम्पनीको संख्या भने घटेको थियो । तेस्रो अटो शोमा ६२ कम्पनीले सहभागिता जनाएकोमा चौथोमा ४३ कम्पनी मात्रै सहभागी भए ।
पाँचौ नाडा अटो शो–२००९
चौथो अटो शो सम्पन्न भएको तीन वर्ष पछि मात्रै पाँचौ भयो । सन् २००९ २८ अगस्टदेखि १ सेप्टेम्वरसम्म भएको यो शो पुनः पुरानो स्थल भृकुटीमण्डपमा फर्कियो । त्यसपछि भने निरन्तर भृकुटिमण्डपमा अटो शो हुँदै आएको छ । नाडाका संस्थापक अध्यक्ष तोलाराम दुगडले अटो शो उद्घाटन गरेका थिए । यो अटो शोमा सहभागी कम्पनीको संख्या अघिल्लोको तुलनामा झनै घट्यो । ३२ कम्पनीले मात्रै भाग लिएका थिए ।
छैठौँ नाडा अटो शो–२०११
७ देखि ११ सेप्टेम्वरमा छैठौँ नाडा अटो शो सम्पन्न भयो । उक्त अटो शो को शुभारम्भ तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गरेका थिए । छैठौँ अटो शोमा ३८ कम्पनीको सहभागिता रहेको थियो ।
सातौँ नाडा अटो शो–२०१२
सातौ अटो शोबाट यो वर्षेनी आयोजना हुन थाल्यो । १९ देखि २३ सेप्टेम्वरसम्म सञ्चालन भएको सातौँ नाडा अटो शोको उद्घाटन तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गरेका थिए । सातौ अटो शोमा सहभागि कम्पनिहरको संख्या बढेर ५५ पुगेको थियो ।
आठौँ नाडा अटो शो–१०१३
११ देखि १५ सेप्टेम्बरसम्म सञ्चालन भएको थियो, यो अटो शो । उक्त अटो शोको उद्घाटन तत्कालिन अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए । आठौँ संस्करणमा सहभागी कम्पनीको संख्या फेरि घट्यो । यो शोमा ४० कम्पनी मात्रै देखिए ।
नवौँ नाडा अटो शो–२०१४
३ देखि ७ सेप्टेम्वरसम्म भएको यो अटो शोको उद्घाटन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले गरेका थिए । नवौँ संस्करणमा भने सहभागी कम्पनिहरुको संख्या अत्याधिक बढ्यो । एक सय भन्दा बढी स्टल राखिएको अटो शो ५० हजारले अवलोकन गरेका थिए ।
दशौं नाडा अटो शो– २०१५
२९ भदौदेखी ४ असोजसम्म संचालन भएको यो शोमा दुई पाङ्ग्रेका १५ ब्राण्ड र चार पाङ्ग्रेका १४ ब्राण्डका सवारी साधन सहभागी थिए । त्यसैगरी कमर्सियल सवारी साधनका ५ ब्राण्ड सहभागी थिए । प्रदर्शनी हुने क्षेत्रफल ९ हजार बर्गमिटरको थियो । यसअघि ८ हजार बर्गमिटर क्षेत्रफलमा अटो शो भएको थियो । क्षेत्रफल बढाएर स्टल संख्या पनि एक सयबाट एक सय २० पु¥याइएको थियो । पहिले एउटा ‘डोम’ मा अटो शो हुँदै आएको थियो । तर यो बर्ष दुई वटा पु¥याइएको थियो । यो अटो शो ६० हजारले अवलोकन गरेका थिए । मेलाको उद्घाटन तत्कालिन अर्थमन्त्रि रामशरण महतले गरेका थिए ।
एघारौं नाडा अटो शो–२०१६
एघारौं नाडा अटो शो १४ देखी १९ भदौसम्म ६ दिन सञ्चालन भएको थियो । मेलामा २ पाङ्ग्रेका १५ ब्राण्ड र चार पाङ्ग्रेको १६ ब्राण्डले सहभागिता जनाएका थिए । कमर्सियल सवारी साधनका ५ ब्राण्ड सम्मिलित थिए । सर्बो लुब्रिकेन्ट मुख्य प्रायोजक रहेको अटो शोमा क्याप्टेन विजय लामा ब्राण्ड एम्वेस्डर भएका थिए । यसअघिको परम्परालाई दोड्दै तत्कालिन अर्थमन्त्रि कृष्ण बहादुर महराले औपचारिक कार्यक्रम विनानै मेलाको उद्घाटन गरेका थिए । मेलामा १ सय २५ स्टलको व्यवस्था गरिएको थियो । मेलामा अटमोबोइल कम्पनीलगायतका ७४ संस्थाको सहभागिता जनाएका थिए । ६० हजारले मेला अवालोकन गरेका थिए भने ३ अर्व रुपियाँभन्दा बढीको कारोवार भएको थियो ।
बाह्रौ नाडा अटो शो–२०१७
बाह्रौ अटो शो भदौ १३ गतेबाट सुरु भएर १८ गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो । मेलामा साना ठूला गरी १ सय ३० वटा स्टल रहेको थिए । जसमा अटोमोवाइल र वैंक गरी ९० संस्थाले सहभागिता जनाएका थिए । १६ वटा ब्राण्डका चार पाङ्ग्रे, १९ वटा ब्राण्डका दुई पाङ्ग्रे र ६ वटा ब्राण्डका हेभी तथा कर्मसियल भेहिकलको सहभागीता रहेको थियो । मेलाको प्रमुख प्रायोजक सर्भो लुव्रिकेन्ट्स थियो भने प्रवेश टिकटमा बम्पर उपहार स्वरुप युएम रेन्गेड बाइक राखिएको थियो । मेलाको उद्घाटन तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मिन वहादुर विश्वकर्माले गरेका थिए । मह जोडीलाई अटो शोको ब्राण्ड एम्वेस्डर बनाइएको थियो । मेला ५० बढीले अवलोकन गरेका थिए भने २ अर्व हाराहारीमा कारोवार भएको थियो । गर्ने आयोजकको अनुमान छ ।
तेह्रौं नाडा अटो शो–२०१८
चालु अटो शो १३ औं संस्करणको हो । मेला भदौ २६ गतेबाट सुरु भएको हो ३१ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । मेलामा साना ठूला गरी १ सय ३४ वटा स्टलहरु रहेका छन् । जसमा ७१ कम्पनीले सहभागिता जनाउने भएका छन् । १९ वटा ब्राण्डका चार पाङ्ग्रे र २० वटा ब्राण्डका दुई पाङ्ग्रे सहित मेलामा टायर, लुव्रिकेन्ट्स, व्याट्रि, ग्यारेज इक्युपमेन्ट र स्पेयर पार्टस तथा एसेसोरिजको सहभागिता छ । यस पटक मेलामा वैंक तथा वित्तिय संस्था र कर्मसियल भेहिकल्सका लागी भने स्टल उपलव्ध गराइएको छैन । अघिल्ले बर्षमा जस्तो ब्राण्ड एम्वेस्डर समेत राखिएको छैन । मेलाको प्रमुख प्रायोजक सर्भो लुव्रिकेन्ट्स हो भने प्रवेश टिकटमा हरेक दिन कुल प्याड मोवाइल राखिएको छ । मेला ५० हजारभन्दा बढीले अवलोकन गर्ने आयोजकको अनुमान छ ।
नाडामा टीभीएस एनटर्क १२५ स्मार्ट कनेक्टेड स्कुटर सार्वजनिक
नाडा अटो शोको सवै तयारी पूरा, ५ अर्बको कारोबार हुने अपेक्षा
सरकारको अटो क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुनु आवश्यक